स्थानीय निर्वाचन : देशभर कांग्रेसको सुरुवाती अग्रता, कुन पार्टीको अवस्था कस्तो ? « Lokpath
स्थानीय निर्वाचन : देशभर कांग्रेसको सुरुवाती अग्रता, कुन पार्टीको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं । शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको देशभर मतगणना जारी रहेको छ ।
जारी मतगणना अनुसार कतिपय वडा तथा पालिकाहरुको अन्तिम परिणाम नै आइसकेको छ । जारी मतगणनामा धेरै स्थानमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता देखिएको छ । भने कांग्रेसलाई नेकपा एमालेले पच्छ्याइरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म
२ स्थानमा भने विजय हासिल गरेको छ ।
देशभरको मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न स्थानका ७७ मतदान केन्द्रमा भने पुनः मतदान हुने छ ।
देशभरबाट सबैभन्दा चासोको रुपमा हेरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना केहीबेर अघि सुरु भएको छ । भने भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना केहीबेरमा सुरु हुने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७९,बैशाख,३१,शनिवार ११:२४